Laanta Socdaalka oo qiimeyn ku samaysay xaalada amaanka Somalia | Somaliska
Isbuucii hore waxay laanta Socdaalka Sweden (Migratonsverket) soo daabacday warbixin cusub oo laga diyaariyay xaalada amaanka ee Somalia. Warbixintaan oo la sameeyay dhamaadkii sanadkii hore ayaa ujeedada ay ahayd in loo kuur galo xaalada amaanka Somalia, taasoo loo isticmaalayo in lagu qiimeeyo magangalyo doonka Soomaalida ee iska dhiibaya Sweden. Laanta Socdaalka ayaa gudi baaritaan u dirtay Kenya iyo Somalia, iyagoo markii ugu horeysay booqasho ku tagay magaalada Muqdisho iyo Baydhabo.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in xaalada amaanka ee koonfurta Somalia ay soo hagaagtay qaasatan magaalooyinka, maadaama aysan hada dagaalo culus ka socon wadanka. Waxay intaas ku dartay in awooda ururka Al-shabaab aad loo wiiqay oo qaasatan laga saaray dhamaan magaalooyinka waaweyn balse wali ay ku suganyihiin tuulooyinka yaryar iyo baadiyaha. Waxay warbixintu intaas ku dartay in Al-shabaab aysan qaasatan bartilmaameed ka dhigan shacabka balse weerarada ay ku qaadaan cadowgooda sida dowlada, UNka iyo Amisom ay ku dhintaan shacab badan. Waxaa kale oo lagu sheegay in Al-shabaab ay siyaadisay dilalka ay u geysanayaan dadka lagu eedeeyo in ay yihiin basaas.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in awooda dowlada Somalia ay wali aad u liidato, isla markaana ciidamada dowlada aysan ahayn kuwo dishibiliin leh, kuwaasoo dhibaatooyin u geysta shacabka ku nool goobaha ay la wareegaan. Dhaca iyo kufsiga ayaa la sheegay in uu ku soo bato goobaha ay dowladu ka saarto Al-shabaab. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in dadka qatarta ugu weyn ku jira in la dhibaateeyo ay yihiin dumarka, caruurta iyo dadka ka soo jeeda qabiilada laga tirada badanyahay. Dadka qatarta ugu weyn ku jira in Al-shabaab ay dhibaateeyaan ayaa lagu sheegay kuwa u shaqeeya dowlada, UN iyo Amisom xiriirka la leh iyo dadka cambeereeya ficiladooda.
Guud ahaan warbixinta ayaa muujinaysa in xaalada Somalia ay wali tahay mid adag balse uu dhacay isbedal weyn ilaa markii Al-shabaab ay ka bexeen Muqdisho. Warbixinta ayaan waxbadan ka duwanayn kuwii la sameeyay sanadihii dambe. Xaalada Soomaalida iska dhiibta Sweden ayaa adkaatay iyadoo hada Sooomaalida qaar badan laga aamuso ama sharciga loo diido marka ay Sweden iska dhiibaan balse Sweden ayaan wali gaarin heer ay dadka ku celiso Somalia.
May 10, 2015 at 22:13
Ogeysis asc dhamaan umada somaliyed waxa la ogeysina inow bananbax weyn oo ugu bandhigidono barlamanka swedhan.dhiwatada naga heysato.diidmada iyo kamamka fadhigoda an waxbarasho heysan iyo xaquuq shaqo cidwalbo oosomali ah wey in ay nagalasoqebgashaa si aan ugahadalno 2 sano caruurtena nalagu xoray iyo dhobwalbo oon qabno si aan uga hadalno si nawad ah tariiqdana dib ayaan kaso shegidonaa cidwalbo oo somali ahna waxan kacodsaneynaa iney nacawiso waxey nagu dhanto iyo somaliska wacalykumasalaan somaliyey toosoo tosoo isku tiirsada
Shirkadda Springs uu xiiseynayo advertising aad website . Waxaan jeclaan lahaa inaan aad ka hesho macluumaad qiimaha iyo macluumaadka xayeysiinta oo arrintan ku saabsan . Adeegyada waa in DNA ee dadka magangalyo doonka ah Somalier.Baaritaanka DNA Soomaali ah Arrimaha socdaalka
Bernadotte & Falk